Ithegi: eHarmony | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 6, 2016 NgoLwesithathu, Aprili 6, 2016 Jason Falls
Iindawo zokukhangela uYobhi ziyinto elinesibini. Baninzi kakhulu abambalwa kubo abade bazame ukwahlula ngokwabo ngokuthi, "yiHarmony" yemisebenzi. NgokukaGqirha Neil Clark Warren, umseki weHarmony, “Akunjalo.” Ngoku inkampani yakhe inemveliso esemthethweni yokuyibonisa kwaye yindlela ebukhali ngakumbi kwaye ephucukileyo kunokuba ucinga. UWarren kunye neqela lakhe lemveliso bazise imisebenzi ePhakamileyo yi-eHarmony in